Kooxo Aan la aqoon oo Dhac u geystay Gaadiid ku soojeeday Kismaayo – SBC
Kooxo Aan la aqoon oo Dhac u geystay Gaadiid ku soojeeday Kismaayo
Kismaayo- Koxo Maleeshiyaad ah oo aan heybtooda la aqoon ayaa dhac ugu geystay gaadiid rakaab ah inta u dhexeya Degmada Dhoobley iyo magaalada Kismaayo kaas oo ka yimid dhanka xeryaha qaxootida dalka Kenya .
Maleeshiyaadkani ayaa gebi ahaan waxay ka qaateen dadkii saarnaa gaarigaasi waxyaalihii saadka u ahaa ee ay wateen sida Mobilada Gacanta iyo Lacago ay ku safrayeen.
Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah kuwii rakaabka ahaa oo la hadlay xafiiska SBC International ee Jubada hoose, dadkani ayaa gebi ahaantood waxa ay ku soo jeedeen dhanka magaalada Kismaayo waxayna ka yimaadeen xeryaha qaxootiga Ifo, iyo xagar ee dalka Kenya .
Waxay intaasi ku dareen in maleeshiyaadkaasi aysan aqoonin waxa ay yihiin islamarkaana ay wada u galeen gaarigii ay saarnaayeen iyagoona ku qasbay in ay dhurka u soo degaan ka dibna kula dhaqaaqay furasho xoogleh .
Tan iyo markii xarakada Alshabaab ay ka soo bexeen deegaano ka tirsan gobolada Jubooyinka waxaa soo kordhayay dhaca lagu hayo haadiidka rakaabka ah iyo kuwa ganacsi ee iyagu halkaasi isaga kala goosha .
Qaar ka mid ah waxgaradka iyo dadweynaha deegaankaasi ayaa arintani walaac ka muujiyay iyagoona ku tilmaamay arimo laga xumaado, waxayna dhacdooyinka yihiin kuwo sii kordhaya tan iyo intii xarakada Alshabaab laga soo saaray deegaanadaasi.
SBC International- Kismaayo
asc dhaman dowlada kumeelgaarka ah waxay shabaab ka saartay meelo ay haysteen oo nabad buuxda ahaa ayaga aya gacanta ugashay markiiba waxa ka bilowday dhac iyo boob habdaba su aasho waxay tahay ma dhib bay soo kordhisay dowlada shariif mise dheef iyo xorayntii ay ku hadaaqaysay
waxan isleeyahay arintaan hadii aan si dagdaga wax llog qaban waxay iska horkeenaysaa dowlada iyo shacabka waxayna taageero u noqonaysa kooxda al shabab